ရဲထွန်း၏ မှတ်တမ်း: January 2012
၁။ ကျွန်ုပ်တို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများသည် ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးမှ စတင်၍ အစဉ်တစိုက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေကြသူများ ဖြစ်သည်။ (၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ ဆိုပြီး ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့တာ၊ ဂိုဒေါင်ဖောက်၊ ပစ္စည်းလု၊ ပြ ည်သူတွေ ကျီးလန့်စာစား နေရတာ သတိရလိုက်ပါ။ )
၂။ ကျွန်ုပ်တ နိုင်ငံသားများသည် စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး မူဝါဒအမှားများ ဒီမိုကရေစီ ဆိတ်သုန်း မှုများကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနိမ့်ကျမှုစသည့် လူမှုဒုက္ခ အ၀၀ကို ဆယ်စုနှစ် ငါးခုကျော် ခံစားခဲ့ကြရပြီးဖြစ်သည်။ (၎င်း နိမ့်ကျမှုများမှ တိုးတက်အောင် ၈၈ မျိုးဆက်များ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဒေါ်စု လက်ချက်ကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။ )
၃။ ယနေ့အချိန်အထိ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ဦးတည် ကြိုးပမ်းကြရမည့် အချိန်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။ (ဒီနေ့ ဒီအချိန်ကို ဖန်တီးခဲ့တာ ၈၈ မျိုးဆက်တွေ အစွမ်းအစ ကြောင့် မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်ဆီ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ လမ်းပြမြေပုံကြောင့်သာဖြစ်သည်)
၄။ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး အတွက် လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အား ထောက်ခံသည်။ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် အားပေးဝန်းရံသွားမည်။ (စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးအတွက် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သပိတ်မှောက်ခိုင်းခဲ့တာကိုတော့ မကန့်ကွက်ရဲပါ)
၅။ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေသော တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး ဖြစ်စဉ်များမှ တစ်ဆင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြည့်စုံသော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန် အမျိုးသား အင်အားစုအားလုံးနှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမည်။ (၈၈ မျိုးဆက်အချင်းချင်း ရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဲ့ကြတဲ့ ABSDF ထဲက မငြိမ်းချမ်းတောတွေကို အရင်ရှင်းပါ)
၆။ နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရေး အတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များအား ပြန်လည်စုစည်းနိုင်ရန်၊ နိုင်ငံရေးအရ ထိန်းသိမ်းခံထား ရသည့် ကျန်ရှိနေသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ပြန်လည် လွှတ်ပေးရေး၊ နိုင်ငံရေးအရ တိုင်းပြည်မှ ထွက်ခွာခဲ့ရသော ပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ ပြန်လာနိုင်ရေးတို့အတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ အလေးအနက် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ (ပြန်ပရောက် နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရေးမှာ အစိုးရက လုပ်ပေးလို့မရပါ. သူတို့လုပ်ရက်တွေကသာ သူတို့ဂုဏ်သိက္ခာကို ဖော်ပြလိမ့်မည်။ မယောင်ရာကို ဆီမလူးပါနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်များ)
၇။ အမျိုးသားစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ မြင့်မားလာစေရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ နှုန်းစံများနှင့် အညီ ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်မှုများ၊ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာမိသားစုများနှင့် ဆက်ဆံရေး တိုးမြင့်လာစေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများအား အားပေးထောက်ခံသွားမည်။ (အားမပေးလို့လည်း မရတော့ဘူး၊ အားမပေးခဲ့စဉ်၊ ကန့်ကွက်ခဲ့စဉ်၊ မထောက်ခံစဉ် တုန်းကလည်း အစိုးရက သူလုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်နေတာပဲ)
၈။ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး တို့အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဆောင်သည့် အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ တပ်မတော်အင်အားစု၊ နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီး၊ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများ အပါအ၀င် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့စည်း တစ်ရပ်လုံးရှိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အင်အားစုများနှင့် ကိုယ်စွမ်း ဥာဏ်စွမ်းရှိသမျှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။ (ပူးပေါင်းတာက လွယ်ပါတယ်၊ ကိုယ်စွမ်းနဲ့ ဥာဏ်စွမ်းရှိအောင် အရင်လုပ်ကြပါ။ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး အော်တဲ့ နိုင်ငံရေးလောက်တော့ ဘယ်နိုင်ငံရေးမှ မလွယ်ဘူးဆိုတာ သတိထားပါ )
၉။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး ကြိုးပမ်းမှုများတွင် အားပေး ကူညီထောက်ခံနေသော ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နိုင်ငံတကာ မိသားစုများနှင့် လက်ရှိပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ယုံကြည် ထက်သန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နေသူအားလုံးအား ကျွန်ုပ်တို့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများမှ အလေးအနက် တန်ဖိုးထားအပ်ပါသည်။ (ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို လက်မခံသူတွေ၊ ၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို နောက်ကြောင်းပြန်ချင်သူတွေ အများကြီးရှိနေသူတွေ ပြည်တွင်းပြည်ပ မှာ အများကြီးရှိနေတာကိုလည်း သတိရပါ)
by Kyaw Thu Aung on Wednesday, January 18, 2012 at 8:56pm
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား Voice Of Myanmar
ကျွန်တော်လဲ အဆင်ပြေအောင် ပြသနာမဖြစ်အောင် ပြောတတ်ပါတယ်၊ ရေးတတ်ပါတယ် ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံတဲ့အကြောင်း ၊ အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ၊ ကမ္ဘာမှာဝင်ဆန့်မှုတွေဟာ နိုင်ငံအပေါ်မှာ ဘယ်လိုကောင်းတဲ့အလားအလာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ။ အခုပါတီတရား ၀င်လုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ လမ်းကြောင်းရွေးချယ်တာဟာ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ၊ မီဒီယာတွေကလည်း အခက်အခဲတွေကြားထဲက ပြည်သူ့တာဝန်ကို ကျေခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ. .ရေးရင်၊ ပြောရင် ရတာပေါ့ဗျာ ... ။ ဒါပေမယ့် ပြောစရရှိတာ ကိုပြောကိုပြောရပါ့မယ် ၊ အမုန်းခံပြီးတော့ကို ပြောရပါ့မယ် ဒီနေ့မီဒီယာအများစုဟာ ပြည်သူ့ အသံအစစ်ကို သရုပ်မဖေါ်နိုင်သေးပါဘူး (တိုင်းပြည်ကို နှစ်ရှည်လများတင်းတင်းကျပ်ကျပ် အုပ်ချုပ်ခဲ့သူတွေကြောင့် ခုလိုဖြစ်နေတာ လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ) ၊ မီဒီယာရဲ့အသံဟာ ပြည်သူ့အသံအမှန် မဖြစ်သ၍ တိုင်းပြည်ဟာ အန္တရာယ်တွေ ၊ စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေ ရှိနေဦးမှာပါဘဲ...။
ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလက ထင်ရှားတဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လွင်မိုးဟာ သူဟာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကို ထောက်ခံတဲ့အကြောင်း မီဒီယာတွေကနေ တဆင့် ပြောခဲ့ပါတယ် ၊ ဒါနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးပါဘဲ ၊ သူ့ဟာသူဘယ်ပါတီကြိုက်ကြိုက် သူ့ကိစ္စသာ ဖြစ်ပါတယ် ၊ ကိုယ်ကလဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပါတီကိုမဲပေးလိုက်ယုံပါဘဲ ၊ ဒါပေမယ့် မီဒီယာတွေဟာ မင်းသား လွင်မိုးကို ဗီလိန်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ကြတယ် ၊ မဲပေးခါနီး ရက်ပိုင်အလိုမှာ လွင်မိုးက သူဟာ မဲပေးဘို့အတွက် သူ့ ဇာတိကိုပြန်မှာဖြစ်ကြောင်း မဲပေးရာမှာလဲ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ဦးဌေးမြင့်ကို ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆို လိုက်ပြန်တဲ့အတွက် မီဒီယာတွေနဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ လွင်မိုးဟာ လူဆိုးကြီးလုံးလုံး ဖြစ်သွားတယ် ၊ ကြံ့ဖွတ် လွင်မိုး ဘာညာဆိုပြီး ပြောကြဆိုကြသံတွေစီစီညံခဲ့ကြတယ် ။ ဒီအထိ ထင်စရာရှိတာက ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမကောင်းပါဘူးလို့ ပြည်သူ့အသံ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် တွေက ထောက်ပြနေပါ ရက်နဲ့ ဒီမင်းသားလွင်မိုးဟာ လုပ်ချင်ရာလုပ်ရကောင်းလားဆိုပြီး ၀ိုင်းဆဲကြတာဖြစ်မယ် လို့ ထင်စရာရှိတယ် ။ ဒါပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့ မဲရလဒ်တွေလဲထွက်လာရော လွင်မိုးထောက်ခံတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ဦးဌေးမြင့်နိုင်သွားတယ် ၊ ကြိုတင်မဲ ကျန်တဖက်ကိုပေါင်းလိုက်ရင်တောင် သူပဲနိုင်ပါတယ် ။ ဒါဆိုရင် ခုနအွန်လိုင်းပေါ်ကအသံတွေဟာ ပြည်သူ့အသံမဟုတ်ဘူးပေါ့ ...။
• ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား Voice Of Myanmar ထံမှ ရယူပါသည်။
ကုလားအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(သို့ ) ကုလားတွေနဲ့ အင်န်အယ်န်ဒီ